WARARKA CAALAMKA;- Madaxweynaha Fransiiska oo ka jawaabay hadalkii gefka ku ahaa Diinta Islaamka, Maamulka Tigreega Ethiopia oo bahdilay Ciidamada Qaranka Ethiopia iyo UK oo bandow cusub ku soo rogtay Dalkeeda. - KALA SOCO - Wargeysyada ugu fiican ee Soomaalida ah ee bixiya warka ugu dhaqsaha badan uguna macquulsan. | KALA SOCO – Wargeysyada ugu fiican ee Soomaalida ah ee bixiya warka ugu dhaqsaha badan uguna macquulsan.
WARARKA CAALAMKA;- Madaxweynaha Fransiiska oo ka jawaabay hadalkii gefka ku ahaa Diinta Islaamka, Maamulka Tigreega Ethiopia oo bahdilay Ciidamada Qaranka Ethiopia iyo UK oo bandow cusub ku soo rogtay Dalkeeda.
November 1, 2020 7:35 PM - Written by Warbaahinta AlloolNews
DEG DEG;- Tigreega oo jab xoogan u gaysteen ciidamada Ethiopia, Mareykanka oo ka baxay heshiis caalamiya iyo Shiinaha oo ka caraysiiyey Mareykanka.
Trump oo Weli Guul Raadinaya
Fransiska oo Turkiga ka Maseyrey iyo arrinka uu sameyey,
Ethiopia oo Gaadhay talabooyin lagu yaqaanay Dawlada sii Caraabaysa,